पाँच दिनको बृद्धि पछि बजारमा १.२४ प्रतिशतको करेक्सन ! - नेपालबहस
पाँच दिनको बृद्धि पछि बजारमा १.२४ प्रतिशतको करेक्सन !
| २०:३१:५० मा प्रकाशित
१० फागुन, काठमाडौं । लगातार पाँच दिनदेखि बढेको शेयरबजारमा आज १.२४ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ । आठ अर्व ४० करोडको कारोबार हुँदा नेप्से परिसुचक २६०७ बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ । झण्डै ३३ अंकले घटेको आजको बजारमा जलविद्युत र अन्य समुह बाहेक सबै क्षेत्रका लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्दा बजारमा सामान्य करेक्सन देखिएको छ ।
आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स ९.२२ अंक घटेर ४७०.३६ विन्दुमा झरेको छ। गत साता लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ मनग्य लगानी गरेका थिए । जसले गर्दा बैंकिङ्ग इण्डेक्स बढ्न गइ समग्र नेप्से बढ्न टेवा पुगेको थियो।
८ कम्पनीको शेयर मुल्य ९ प्रतिशत भन्दा धेरै
आज कारोबार भएका ८ कम्पनीको शेयर मुल्य ९ प्रतिशत भन्द धेरैले बृद्धि भएको छ । आज नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, आँखुखोला, नेपाल हाइड्रो, अपर तामाकोशी, चन्द्रागीरी हिल्स लगायतका कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। हेर्नुहोस् आज कमाउने १० कम्पनीहरु :
चार कम्पनीको शेयर मुल्य ५ प्रतिशत भन्दा धेरै ले घट्यो
आज कारोबार भएकामध्ये सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको मुल्य ५.५२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै सिभिल बैंकको ५.३२, मेगा बैंकको ५.२० प्रतिशतले घटेको छ ।
आज कारोबारको आधारमा एनआईसी एशिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको ३८ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। त्यसैगरी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरको ३२ करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ । त्यसैगरी निर्धन उत्थान लघुवित्त, शिखर इन्स्योरेन्सको शेयर पनि उल्लेख्य मात्रामा कारोबार भएको छ ।
गएका पाँच दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको बजार आज भने घट्न पुगेको छ । पछिल्लो पाँच दिनको कारोबारलाई आधार मान्ने हो भने नेप्से झण्डै १४७ अंकले बढेको थियो । आज बजारमा तरलता अभाको समाचार आएर पनि कारोबारमा गिरावट आउन बल पुगेको एक ब्रोकरले नेपालबहसलाई बताए । उनले भने पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नै आगामी चैत मसान्तसम्म शेयर कर्जामा हेरफेर नगर्ने जानकारी दिइसकेको छ । सोही कारण ठुला लगानीकर्ताले सस्सतो व्यजमा अधिक लगानी गर्दा तरलता अभाव भएको हल्ला बाहिरीएता पनि त्यस्तो कर्जा लामो समयको लागि नभएका कारण बजारमा आएजस्तो हल्ला अनुसार तरलता अभाव नहुने ठोकुवा गरे ।
बिहीबार तीन कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयरमूल्य कति ? ५ घण्टा पहिले
बुधबार यी १० कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधीक कमाए ? १ दिन पहिले
१.६० प्रतिशले घटेको शेयरबजारमा यी १० कम्पनीले गरे सर्वाधिक कारोबार ? १ दिन पहिले
नेप्सेमा प्रभु बैंकको १ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत १ दिन पहिले
बुधबार यी दुई कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो ? १ दिन पहिले
जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगर्ने दुई चिकित्सकसँग स्पष्टीकरणको माग १४ घण्टा पहिले
ज्योति विकास बैंकद्वारा बेनी अस्पताल र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई बेबी वार्मर प्रदान ६ घण्टा पहिले
किशोरी विद्यालयमा खुलेर समस्या भन्न सक्दैनन् ११ घण्टा पहिले
संवैधानिक निकायका नियुक्ति संविधानको मर्म विपरित भएकाेमा बार एसोसिएशनकाे आपत्ति ४ दिन पहिले
बाँझो जग्गामा कागती खेती गर्दै युवा १ दिन पहिले
नेकपा नेता पन्तविरुद्ध कोमल वली अदालत जाने ४ दिन पहिले
महोत्तरीमा नगर महोत्सवको लहर २ दिन पहिले
सोमबार सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँड ४ दिन पहिले
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरुले सुप्रिम क्याफेमा विशेष छुट पाउने ३ दिन पहिले
विप्लवले प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउँदै २ दिन पहिले
साना किसान लघुवित्तले नबिकेको १२ हजार हकप्रद फागुन २८ गतेदेखि बिक्री गर्ने २ दिन पहिले
दीपिकासँग मुम्बइका रोहितले रोमान्स गर्ने ३ हप्ता पहिले
एकै साथ पाँच दर्जन बढी निलगाई फेला ८ घण्टा पहिले
सर्वोच्चको फैसला स्वागत याेग्य कदम : सभापति देउवा १ हप्ता पहिले
लोपोन्मुख कुुसुन्डा भाषा जोगाउन कक्षा सञ्चालन ६ दिन पहिले
फागुन ५ गते कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ३ हप्ता पहिले
आज काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बत्ती जाने, कहाँ-कति बजे ? २ हप्ता पहिले
प्रचण्डको ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ सार्वजनिक ७ महिना पहिले
रेल्वे विभागको ठेक्कामा मिलेमतो भएको छैन : निर्माण व्यवसायी महासंघ ६ महिना पहिले
गम्भीर घाइते कामदारको हेलिकोप्टरबाट उद्धार ८ महिना पहिले
ट्रम्प हार्ने भएपछि अमेरिकामा विरोध प्रदर्शन ४ महिना पहिले